musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Digital Platform yeMiss Universe Makwikwi
ImpactWay, yesocial media platform, yakazivisa kudyidzana kwayo neMiss Universe Organisation mukutsigira Makwikwi emakumi manomwe eMISS UNIVERSE, anoburitswa pasi rose musi waZvita 70, 12, na2021 pm EST kubva kuEilat, Israel.
ImpactWayv imwe nzira kune yakakura masocial network mapuratifomu. Inoshanda semhando nyowani yedhijitari ecosystem, yakatarisana nezvakanaka zvemagariro uye inogonesa vashandisi - vanhu, mabhizinesi, uye zvisingabatsiri - kuita, kuita, uye kugovera magariro maitiro pasi rose.
Iyo ImpactWayv app yakagadzirirwa kutsigira kudyidzana kwepasirese magariro uye kuita kwenharaunda yepasi rose yevakwikwidzi veMiss Universe vanobva kunyika dzinosvika makumi masere, nevateveri vavo, nevaoni pasi rese, vachisvika vangangosvika hafu yebhiriyoni vanoona.
Sechikamu cheMakwikwi e70th MISS UNIVERSE, ImpactWayv iri kuitawo dambudziko pakati pevamiriri vese kuti vagadzire zvakanyanya "ImpactWayv" paImpactWayv app pakati pevateveri vavo nevateveri. Mamiriro eImpactWayv's new proprietary social engagement metric, kuyera kuziva kunogadzirwa uye zviito zvinofemerwa nechiitiko papuratifomu.
Iyo ImpactWayv Dambudziko rakavhurirwa mukwikwidzi wega wega uye rinoenderera mberi kusvika Zvita 11, 2021. Mukundi wedambudziko, sekutsanangurwa kwakawanda kweImpacts uye hunyanzvi hwekuita, achaziviswa panguva yekutepfenyurwa kwepamhepo uye achagamuchira mupiro neImpactWayv rubatsiro rwechisarudzo chemukwikwidzi.